Ch 1 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 1 Mark
1:1 Ny niandohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ny Zanak 'Andriamanitra.
1:2 Araka izay voasoratry ny mpaminany Isaia: "Indro, Izaho maniraka ny Anjely eo alohanao ny tavanao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao.
1:3 Injany! Misy feon'ny miantso mafy any an-efitra: Hanomana ny lalan 'ny Tompo; ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. "
1:4 I Jaona tany an-efitra, batisa ka nitory ny batisan'ny fibebahana, toy ny famelana ny fahotana.
1:5 Ary nandeha nanatona azy ny faritra rehetra tany Jodia sy Jerosalema rehetra, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana, niaiky ny fahotany.
1:6 Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva, ary fehin-kibo hoditra tamin'ny valahany. Dia nihinana valala sy tantely remby.
1:7 Ary Izy nitori-, nanao hoe:: "Ny iray mahery noho ahy avy ao aoriako. Ka izaho tsy miendrika hamaha tonga teo ary ny laces ny kiraro.
1:8 Izaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano. Na izany aza tena, Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina. "
1:9 Ary nony fa, tamin'izany andro izany, Jesosy dia tonga avy any Nazareta any Galilia. Ary nataon'i Jaona batisa tao Jordana.
1:10 Ary niaraka tamin'izay dia, eo niakatra avy teo amin'ny rano, dia hitany ny lanitra nisokatra, ary ny Fanahy, tahaka ny voromailala, midina, sy itoerany aminy.
1:11 Ary nisy feo avy tany an: "Ianao no Zanako malalako,; ao ianao no sitrako. "
1:12 Ary niaraka tamin'izay ny Fanahy nanosika azy ho any an-efitra.
1:13 Ary izy tany an-efitra efa-polo andro sy efa-polo alina. Ary nalain'i Satana fanahy. Ary izy niara ny bibidia, ary ny anjely nanompo azy.
1:14 Avy eo, rehefa Jaona natolotra, Jesosy niditra teo an Galilia, nitory ny filazantsaran'ny fanjakana 'Andriamanitra,
1:15 ary nanao hoe:: "Fa ny fotoana efa tanteraka sy ny fanjakan'Andriamanitra efa manakaiky. Mibebaha ary minoa ny Filazantsara. "
1:16 Ary nandalo teo amoron'ny Ranomasin'i Galilia, dia nahita an'i Simona sy ny rahalahiny Andrea, mandatsa harato tao an-dranomasina, fa mpanarato izy.
1:17 Ary hoy Jesosy taminy:, "Andao hanaraka ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo. "
1:18 Ary nandao ny haratony, dia nanaraka an'i Jesosy.
1:19 Ary manohy amin'ny fomba kely avy any, dia nahita an'i Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny,, ary izy ireo dia nanamboatra ny haratony in-tsambokely.
1:20 Ary niaraka tamin'izay dia niantso azy. Ary nony niala tany aoriana an'i Zebedio rainy teo an-tsambokely mbamin'ny ny mpikarama tanana, dia nanaraka an'i Jesosy.
1:21 Ary niditra tao Kapernaomy. Ary raha niditra tao amin'ny synagoga avy hatrany ny Sabata, nampianatra azy.
1:22 Dia talanjona ny olona noho ny fampianarany. Satria nampianatra azy toy izay manana fahefana, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna.
1:23 Ary tao amin'ny synagoga, nisy lehilahy azom-panahy maloto; ary niantso mafy ralehilahy,
1:24 nanao hoe:: "Inona no ho anao, Jesosy avy any Nazareta? Efa avy handringana anay? Fantatro anie fa Ianao no: ny Iray Masin 'Andriamanitra. "
1:25 Ary Jesosy Nampirisika azy, nanao hoe:, "Mangina, ka hiala amin'ny tany ny olona. "
1:26 Ary ny fanahy maloto, nampifanintontsintona ny tenan'ilay marary, dia niantso tamin'ny tamin'ny feo mahery, niala taminy.
1:27 Ary izy rehetra dia gaga fa nanontany izy ireo niara-nisaina, nanao hoe:: "Inona ity? Ary inona moa izany fampianarana vaovao? Fa amin'ny fahefana no andidiany ny fanahy maloto aza, ka dia manaiky Azy. "
1:28 Ary ny lazany niely tany haingana, manerana ny faritra manontolo Galilia.
1:29 Ary tsy ela rehefa niala avy tao amin'ny synagoga, dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea Jesosy, ary Jakoba sy Jaona.
1:30 Fa ny reny-in-lalàna Simona nandry loza tamin'ity tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza taminy ny momba azy.
1:31 Ary manakaiky azy, dia nanarina azy, nandray ny tànany. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny tazo, ka dia nanompo azy.
1:32 Avy eo, rehefa hariva tonga, taorian'ny efa maty ny masoandro, dia nentina tany aminy izay rehetra nanana aretina sy ireo izay efa nanana demonia.
1:33 Ary ny tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavaran'ny trano.
1:34 Ary nahasitrana olona maro izay nampahorin'ny aretina isan-karazany. Ary demonia maro no navoakany, dia tsy nety namela azy ireo hiteny, satria nahafantatra Azy ireny.
1:35 Ary nifoha vao maraina, miala, dia nivoaka ho any amin'ny efitra toerana, ary tao no nivavaka.
1:36 ary Simon, sy ireo izay niaraka taminy, nanaraka azy.
1:37 Ary rehefa nahita azy, hoy ireo taminy:, "Fa izay rehetra mitady anao."
1:38 Ary hoy Izy taminy:: "Andeha isika hiala hankany amin'ny tanàna manodidina sy ny tanàna, ka mba hitoriako teny any koa. Tokoa, dia noho izany fa tonga Aho. "
1:39 Ary Izy nitori-teny tao amin'ny synagogan'ny olona sy eran'i Galilea rehetra, sady namoaka ny demonia.
1:40 Ary nisy boka nanatona Azy, nangataka azy. Sady nandohalika teo anatrehany, hoy izy taminy:, "Raha vonona, ianao mahay manadio ahy. "
1:41 Avy eo Jesosy, nitondra hiantra azy, naninjitra ny tànany. Ary nanendry azy, hoy izy taminy:: "Mety Aho. Madiova ianao. "
1:42 Ary rehefa niteny, avy hatrany ny habokany niala taminy, ka dia nadio izy.
1:43 Ary Nampirisika azy, Ary nampandeha azy avy hatrany.
1:44 Ary hoy izy taminy:: "Tandremo sao ianao hilaza tsy misy. Fa mandehana miseho any amin'ny mpisoronabe izy, dia manatera ny fanadiovana anao izay Mosesy nandidy, ho vavolombelona ho azy ireo. "
1:45 Fa rehefa lasa nandeha, izy vao hitory sy hampiely ny teny, ka dia tsy nahazo niditra miharihary afaka tanàna, fa tsy maintsy mitoetra ivelany, in foana toerana. Ary izy ireo dia tafangona teo aminy amin'ny lalana rehetra.